Deep Freeze Standard 7.21 ဒေါင်းပြီး သုံးကြမယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Deep Freeze Standard 7.21 ဒေါင်းပြီး သုံးကြမယ်…
Deep Freeze Standard 7.21 ဒေါင်းပြီး သုံးကြမယ်…
Posted by ကို ထွဋ် on Sep 30, 2014 in Computers & Technology, Software & Links |6comments
IT Bank... ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်...
Deep Freeze ဆိုတာက…
(၁) မိမိကွန်ပျူတာ အတွင်းသို့ Virus ၀င်ရောက်ခြင်းမှ လုံးဝကာကွယ်ရန် (သို့)
(၂) မိမိ၏ကွန်ပျူတာကို အမြဲတမ်း မိမ်ိရှိနေစေချင်သော ပုံစံအတိုင်း ရှိနေစေရန် (သို့)
(၃) အခြားလူ တစ်ယောက်ယောက်က မိမိကွန်ပျူတာကို ( Administrator Account ) ဖြင့် အသုံးပြုနေသော်လည်း မိမိ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ( Deep Freeze ၏ password မသိဘဲ ) Software များ Install ( or ) Uninstall ပြုလုပ်မရခြင်း ၊
(၄) မိမိကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ မည်သည့် Data ကိုမှ မိမိ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဖျက်ဆီးခြင်း ( သို့ )
(၅) Data များပေါင်းထည့်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်မရနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ် ထားနိုင်သော အလွန်ကောင်းသည့် System Security Software ဖြစ်ပါသည်။
System File ကိုသာမကဘဲ Data File ကိုပါ Restore ပြုလုပ်နိုင်သော Software ဖြစ်သည်။ Restart တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ရုံဖြင့် မိမိကွန်ပျူတာ၏ မူလအနေအထားကို ပြန်ရောက်စေသော Software လည်းဖြစ်ပါသည်။ Deep Freeze Software ကို အောက်ဖော်ပြပါနေရာများနှင့် အခြေအနေမျိုးများတွင် အသုံးပြုသင့် ပါသည်။
(၁) အရေးကြီးသော Data များ သိမ်းဆည်းထားသော ကွန်ပျူတာများ၊
(၂) နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ထည့်ရန် ခက်ခဲသော Data များ ရှိနေသည့် ကွန်ပျူတာများ၊
(၃) Internet , LAN ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားပြီး Virus အချိန်မရွေး ၀င်ရောက်နိုင်သော ကွန်ပျူတာများ၊
(၄) Net Café ဆိုင်များ ( user များ အသုံးပြုပြီး ကျန်ခဲ့သော File များနှင့် Email ( or ) Internet မှ ၀င်ရောင်လာသော Virus များအား မည်သည့်အခါမှ ပြန်ရှင်းပေးရန်မလို၊ Restart တစ်ကြိမ်လုပ်ရုံဖြင့် အားလုံးအကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမည်။ )
(၅) မိမိကွန်ပျူတာသည် အမြဲတမ်း မိမိ၏ကွန်ပျူတာဖြစ်နေစေရန်။
မှတ်ချက်။ ။User က New Software Installation ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် My document and Destop ပေါ်မှာ Data များပေါင်းထည့်ခြင်းတို့ကို ခေတ္တခဏ လက်ခံထားမှာဖြစ်သော်လည်း Restart ပြုလုပ်လိုက်ပါက ယခင်မူလ အနေအထားကို သူ့အလိုလို ပြန်ရောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Drive D, E,… စသည်ဖြင့် အခြားသော Data များ သိုလှောင်ထားရာ Drive များကိုလည်း Check လုပ်ပေးခဲ့ပါက Data များပေါင်းထည့်ခြင်းတို့ကို ခေတ္တခဏ လက်ခံထားမှာဖြစ်သော်လည်း Restart ပြုလုပ်လိုက်ပါက Data များပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် Internet သုံးစွဲခြင်းကြောင့် Virus ၀င်ရောက်လာခြင်း၊ MemoryStick သုံးစွဲခြင်းကြောင့် Virus ၀င်ရောက်လာခြင်း ၊ Local Area Network (LAN) အတွင်းမှ Virus ၀င်ရောက်လာခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ Virus ရှိနေပြီဟု ယူဆလျှင် Restart လေးသာ ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ အားလုံး ယခင်မူလ အနေအထားအတိုင်း ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ယခင် မူလအနေအထားဆိုတာ ဘာလဲ ? ၊ ဘယ်အချိန်တုန်းက မိမိ၏ကွန်ပျူတာ System အနေအထားကို ပြောတာလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ကွန်ပျူတာကို Software အသစ်ထပ်ပြီး Install လုပ်ချင်တာတို့ ၊ Data များ ထပ်ပြီး ထည့်ချင်တာတို့ကို လုပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Deep Freeze က Enable ဖြစ်နေရင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပြုလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိကွန်ပျူတာကို Software အသစ်တင်ချင်လျှင် ဖြစ်စေ ၊ Data များ ထပ်ပြီး ထည့်ချင်လျှင်ဖြစ်စေ ၊ မိမိကွန်ပျူတာကို အခြားသော မိမိစိတ်ကြိုက်အရာများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ပါက Deep Freeze အား Disable ပြုလုပ်ထားမှသာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Credit: လွင်မင်းဗိုလ် ဘလော့မှ…
Software Download Link – Download Here
မှတ်ချက်မှာ သုည ပစ် နေလို့ သနားလို့ ပါ။
ကိုယ်ပိုင် စာဘဲ ရေးတင်စမ်း ပါ ကိုကိုမောင်မောင်ထွဋ် ရယ်။ :))
ဟုတ်ပါဘူး.. အရီးရဲ့… ကျွန်တော်ရေးလဲ ဒီစာပဲ.. ဒါပေမဲ့ သူပြောတာ ဖတ်ပြီးသုံးလို့ ရတဲ့ အသိက ဒါပဲ ဖြစ်နေတော့ ဂုဏ်ပြုတာပါ… ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီး တကယ်ဟုတ်မှ ကျွန်တော်လဲ ပို့စ်တင်ရဲတာပါ… အောက်က ဒေါင်းလုပ်လင့်ကတော့ ကျွန်တော့ ကိုယ်ပိုင်ပါ.. သူ့မှာတင်ထားတဲ့ လင့်က မရဘူးဗျ… ပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ထားတာပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. အားပေးလို့…
အဲ့ဒီ deep freeze က lock ကျသွားတတ်တာတွေ ဘာတွေ ရှိတယ်ဆို…..
နည်းနည်း အန္တရာယ် ရှိတတ်တယ် ကြားဖူးလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ရပါတယ်… Safe Mode ကနေ ပြန်လုပ်လဲ ရတယ်… Your Uninstaller ကနေ ဖြုတ်လဲရတယ်.. အဓိကကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်လေ… ကြိုက်သလောက် စတစ်ထိုး.. ဆော့ဝဲလ်တွေ ၀င်ကလိသွား… Restart ချလိုက်ရင် အကုန် ပြန်ကောင်းလေ…
ဆော့ဝဲလ် အသစ် စမ်းချင်ရင်လဲ အဲဒါလေး အုပ်ပြီး စမ်းလေ.. အိုကေပဲ…
သိပါဘူး ပြောနေကြတာ အဲ့ဒီ deep freeze ကို ပြန်ပြီး unfreeze မရတော့လို့တဲ့
အဲဒါ uninstall တော့လဲ restart ချပြီးရင် အရင် check point ကို ပြန် ရောက်သွားတယ် ဆိုလို့
safe mode နဲ့ uninstall လုပ်တော့ ရတယ်ပေါ့ ဂလိုလား
အင်းပေါ့.. အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ…